Microsoft: Azafady ampidiro amin'ny lisitry ny mailaka Ferrari | Martech Zone
Microsoft: Azafady ampidiro amin'ny lisitry ny mailaka Ferrari anao aho
Zoma, Desambra 29, 2006 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tonga ny fotoana hikorontana. (Raha afaka maka sary ahy ianao izao, dia manetsiketsika ny rantsan-tànako aho ary mimonomonona toa an'i Louis Black araka izay tratrany.)
Be resaka na inona na inona ny tontolom-bolongana amin'izao fotoana izao satria Nandefa solosaina finday Ferrari niaraka tamin'ny Vista i Microsoft efa navoaka tamin'ny bilaogera A-List maromaro. Matahotra ny olona. Toy ny hoe mividy fifidianana i Microsoft na zavatra hafa, na izy ireo ao ambadiky ny famonoana JFK, na nivarotra fitaovam-piadiana nanapotika an'i Korea Avaratra izy ireo.
Miaraka amin'i Scoble aho amin'ity iray ity!
Mifohaza ry havana, raharaham-barotra ity! Adidiny voalohany amin'ny mpivarotra rehetra ny mampanjari-bola amin'ny toerana misy fiantraikany amin'ny ankamaroan'ny mpividy… vanim-potoana. Manana teti-bola ianao, aleo ampiharina. Ireto misy maningana:
Microsoft dia mitaky ny fitakian'ireo bilaogera (tsy nanao izany izy ireo)
Ummmm, izay ilay izy.
Tsy hafa noho ny an'i Shaq ny mahazo kiraro kiraro fanaingoana namboarina isaky ny andro amin'ny taona. Mitomany basikety any amin'ny Mommies rehetra ve ny ankizy hafa rehetra fa nahazo sneaker maimaim-poana i Shaq saingy tsy nanao izany? TSIA! I Neny dia mametafeta ny koba satria i Shaq dia influencer ary mandoa in-8 avo heny araka izay tokony ho azy ho an'ireo kiraro kiraro malaza izy.
Nahita ny fiafaran'ny hazakazaka Nascar ve ianao? Nanao satroka iray ny mpamily, nisotro soda misy marika marika, nanipy satroka hafa (samy manana logo boriky lehibe izy ireo), ary nanomboka ny fehezan-teny tsirairay tamin'ny anarana mpanohana 5 izy. “Azoko lazaina aminao Jim, ity Dupont, Reeses, Toshiba, Levi's, Chevrolet ity dia tena nahavita be tany.” Misy olona mandeha any ivelan'i Nascar ve mikiakiaka hoe: “Miezaka mitaona ahy amin'ny dokambarotra marika rehetra ianao!”. Tsia.
Angamba i Tiger Woods dia tokony hanana fanamarihana amin'ny akanjony fa ny klioba ampiasainy dia nomena azy, na ny baolina, na ny Cadillac. Miangavy re olona, ​​mahazo fiainana. Tsy mpanao politika izahay. Izahay dia tsy eo amin'ny gazety iray izay ilana hanasarahana ny làlan'ny asa fanaovan-gazety sy ny fanaovana doka satria ny lefom-pahefana no afaka manapa-kevitra ny amin'ny fifidianana. Tsy nanao fianianana na nianiana tamin'iza tamin'iza aho. Mpamaham-bolongana aho. Manana mpamaky 500 isan'andro aho ary ny marketing misy ahy dia tsy manonitra ny vidin'ny fidirana amin'ny Internet akory.
Ny bilaogera ihany no olona manana adidy amin'ny mpamaky azy fa tsy Microsoft. Ireo bilaogera voalohany dia nahazo ny solosainany ary ny zavatra voalohany nitoraka bilaogy momba azy ireo? Hey, azoko avy amin'i Microsoft ity solosaina finday ity. Hainao?! Fanambarana izany ary fantatrao izao.
Izaho manokana dia maniry ny hizara ny solosaina finday sy ny Vista i Microsoft. Te handre momba ny fomba fandehany aho, na mendrika ny vola na tsia. Napetrak'i Microsoft ao amin'ny lisitrao aho! Te hahalala ny mpamakiako!
Ny lesoka tokana natao tao anatin'ity debacle iray manontolo ity dia ny fivarotana fihodinan'i Microsoft. Ity no mety ho fiarahako nanao marketing:
Fanontaniana avy amin'ny Blogger (feo mangatsiaka): Andriamatoa Evil Microsoft! Naheno izahay fa nizara solosaina finday tena lafo vidy tamin'ny Vista efa napetraka taminy tao amin'ireo bilaogera A-list. Heverinay fa manandrana mitaona ireo mpitoraka bilaogy ireo miaraka amin'ireto fanomezana lafo vidy ireto amin'ny fanantenana izy ireo ho voataona hanao bilaogy tsara momba ny zavatra niainany Vista. Marina ve izany?
Valiny avy amin'ny Douglas Karr, VP Marketing an'i Microsoft (zava-misy): Ie, donto. Anjarako izany.
Tsy nandoa ahy na inona na inona i Microsoft tamin'ity lahatsoratra ity. Raha ny marina dia mandefa azy amin'ny Mac aho.
Nahazo tapakila Colts vitsivitsy aho indray mandeha avy any Pat Coyle. Mety daholo ve izany? Nanampy iray taonina tamin'ny bilaoginy aho ary nanaitra ahy niaraka tamin'izy ireo izy herinandro vitsivitsy lasa izay. Tezitra amiko ve ianao? Moa ve aho nanararaotra ny fananako pejy ho valiny? Angamba, tsy dia azoko antoka. Lehilahy tsara izy manana bilaogy mahafinaritra ka matetika no tondroiko. Mandehana vakio! Nahazo ny Widget vaovaon'izy ireo ve ianao? Tena milay izany, eto ianao:
Ity bilaogy ity dia noforonina tamin'ny PHP sy MySQL ary plugins marobe izay MAIMAIM-POANA 100%. Ary tiako izy ireo! Mandehana mihorakoraha amin'izy ireo noho ny nanomezany ahy maimaim-poana, sa tsy izany ?!
Mar 15, 2008 ao amin'ny 4: PM PM